UNGAWUFAKA NJANI UMHLELI WEPOLISI YEQELA (GPEDIT.MSC) - ITHAMBILE
Ungawufaka njani umhleli wePolisi yeQela (gpedit.msc): Le mpazamo ‘ IWindows ayifumani gpedit.msc Qinisekisa ukuba ulichwetheze ngokuchanekileyo igama, uze uzame kwakhona 'Ijongene nabasebenzisi abanezinto ezisisiseko, umgaqo-nkqubo okanye ipremiyamu yasekhaya ezifakiweyo iinguqulelo zeWindows ezingafumani nkxaso kumhleli woMgaqo-nkqubo.
1) Kulula kakhulu ukulungisa le mpazamo ngokunika amandla umhleli weQela loMgaqo-nkqubo weQela usebenzisa umhleli womgaqo-nkqubo weqela lesithathu kunye le khonkco yokukhuphela .
2) Khuphela nje uMhleli woMgaqo-nkqubo weQela kwikhonkco elinikwe apha ngasentla, yikhuphe usebenzisa i-Winrar okanye iWinzip kwaye emva kokucofa kabini kwifayile yeSetup.exe kwaye uyifake ngesiqhelo.
3) Ukuba uneX64 Windows kuya kufuneka wenze oku kulandelayo ukongeza koku kungasentla.
4) Ngoku uye ku ' SysWOW64 'Ifolda ebekwe kwi C: IiWindows
5) Ukusuka Apha Khuphela ezi fayile: Ifolda yeQela lePolisi, ifolda yeQelaPolicyUsers, iGpedit.msc File
6) Emva kokuKopa ezi fayile zingasentla uncamathisele kuzo C: Windows System32 Ifolda
Indlela yokufaka kwakhona ukubonisa abaqhubi windows 10
7) Yiyo yonke into kwaye Nonke niyenziwe.
Ukuba ufumana I-MMC ayinakwenza i-snap-in umyalezo wemposiso ngelixa usebenzisa i-gpedit.msc, jonga la manyathelo alandelayo ukulungisa ingxaki.
1) Khipha yonke into oyifakileyo.
2.Zisa kwakhona ukufaka umgaqo-nkqubo weqela elinamalungelo olawulo kodwa Sukucofa kwiqhosha lokugqiba (Kuya kufuneka ushiye ukugqitywa kungagqitywanga).
3. Ngoku ukusombulula ingxaki ye-snap-in yiya kwiifolda zetemplate yeewindows eza kuba apha:
Ngaphakathi kwifolda ye-temp yiya kwifolda ye-gpedit kwaye uza kubona iifayile ezi-2, enye yenkqubo ye-64-bit enye ye-32-bit kwaye ukuba awuqinisekanga ukuba loluphi uhlobo lwenkqubo onayo, cofa ekunene kwiqhosha windows kwaye Cofa kwinkqubo, ukusukela apho uya kwazi ukuba loluphi uhlobo lwenkqubo onayo.
5. Kulapho Cofa ekunene kwi-x86.bat (ye-32bit yeWindows Abasebenzisi) okanye i-x64.bat (ye-64bit yeWindows Abasebenzisi) kwaye uyivule ngeNotepad.
6. Apho kwifayile yokubhala uya kufumana amanqaku emicu emi-6 equkethe oku kulandelayo
windows 10 isango lokungagqibeki alifumaneki
% Igama lomsebenzisi%: f
7. Ke hlela loo migca uze uphinde ubeke igama lomsebenzisi%%: f nge % Igama lomsebenzisi%: f (Faka iikowuti)
8 Gcina iFayile uze usebenze ifayile ye-bat ngokucofa ngasekunene- Sebenzisa njengoMlawuli.
Yiyo leyo. Uya kusebenza gpedit.msc. Ufunde ngempumelelo indlela yokufaka umhleli wePolisi yeQela (gpedit.msc) kunye nendlela yokulungisa I-MMC ayinakwenza i-snap-in Impazamo kodwa ukuba usenemibuzo malunga nale posi zive ukhululekile ukubabuza kwicandelo lamagqabaza.
izinto ekufuneka uzenzile ngaphambi kokuphuculwa kweewindows 10
windows 10 uhlaziyo luqhubeka nokufaka uhlaziyo olufanayo ngaphezulu nangaphezulu
windows 10 khubaza iphedi yokuchukumisa xa imouse
windows 10 ukubuyela umva komgca wokuyalela